2020 - NorSom News
Stavanger: Soomaalidu shaqo ma imaan karaan, ilaa ay keenaan Negetiv-test Corona ah.
Norsomnews - 31. desember 2020 0
Shaqaalaha asal ahaan soomaalida ah ee ka shaqeeyo xarumaha dowlada ee Kommunaha(Degmada) Stavanger, ayaa lagu amray inay keenaan baaritaan negativ ah oo xanuunka Corona...
Ciidamada Booliiska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa toogasho ku dilay wiil Soomaali ah, taasi oo horseeday dibad-baxyo. Booliiska ayaa la...
Norsomnews - 26. desember 2020 0
Dalka waxaa laga diiwaangaliyay kiiskii ugu horreyay ee nooca cusub ee cudursidaha coronavirus ah, taasoo keentay shaki ah in mowjado kale oo la xiriira...
Maanta oo Sabti ah waxaa Norway soo gaaray daawadii ugu horeysay ee Talaalka Corona ee Norway, waxaana isla beri oo Axad ah lagu wadaa...
Qarax weyn oo ruxay magaalada Nashville.
Norsomnews - 25. desember 2020 0
Qarax gilgilay magaalada Nashville Ee dalka Mareykanka
Sarpsborg: Boolis istaajiyay salaad Jimce masaajid gudihiis.
Booliska magaalada Sarpsborg ee gobolka Viken ee dalkan Norway ayaa gudaha u galay mid kamid ah masaajidada muslimiinta magaaladaas, kaas oo ay ka socotay...
Norsomnews - 22. desember 2020 0
Wasaaradda caafimaadka Norway ayaa sheegtay in 26-ka bishan Desember, Norway si rasmi ah looga bilaabi doono talaalka xanuunka Corona. Waxeyna wasaaraddu qorsheysay in...
Mustafa iyo Abdel waa labo wiil oo walaalo ah oo da´ahaana isku xigo. Waxeyna Norway soo galeen iyaga oo midna 6 sano jiro midna...
Shirkada qareenada ee Fend ayaa sheegtay in hey´adda qoxootiga ee UNE ay dacwad kusoo oogi doonto, iyaga oo ku eedeyn doono inay jabiyeen sharciga, marka...
Sida ay maanta sheegtay wasiiradda arrimaha bulshada dalka Sweden, Lena Hallengren waxaa 27-ka bishan Desember oo ku aadan maalinta axadda ah ee dhamaadka todobaadkan,...
Booliska magaalada Bergen ayaa xalay fiidkii toogasho ku dilay nin 30-meeyo jir ah, kaas oo markii hore ay boolisku rabeen inay soo qabtaan. Waxaana...
Norsomnews - 21. desember 2020 0
Ayada oo shirkadaha caalamka ay orod ugu jiraan inay soo saaraan tallaalka COVID-19, dalalkuna ku hardamayaan inay noqdaan kwua ugu horreeya ee hela, ayaa...
Sweden oo sababtan darteed u xireyso xadka ay Denmark la wadaagto.
Sida uu xaqiijiyay wasiirka arrimaha gudaha dalka Sweden Mikael Damberg, dowlada Sweden ayaa laga bilaabo caawa saqdii dhexe xiri doonto xuduuda ay la leedahay...
Go´aan: Halkan waa inuu iska diiwaangaliyo Qof walba oo Norway soo galayo.
Shir jaraa´id oo ay maanta si wadajir ah u qabteen wasiirka caafimaadka Norway iyo madaxa waaxda hey´adda caafimaadka Norway, ayay ku sheegeen talaabooyin cusub...
Norway ayaa ugu danbeyn ku biirtay dalalka xayiraada saaray duulimaadyada iyo dadka ka imaan lahaa dalka UK. Arrintan ayaa kusoo aadeyso xili wadamo dhowr...
Norsomnews - 20. desember 2020 0
Dowlada dalka Sweden ayaa ku biirtay dowlada dhowr ah oo mamnuucay duulimaadyada diyaaradaha ka imaada dalka UK. Kadib markii dalkaas laga helay nooc cusub...
Deg-deg: Qof walba oo UK kasoo gala ama joogay hala baaro.
Sida lagu sheegay war saxaafadeed daqiiqado kahor kasoo baxay hey´adda agaasinka caafimaadka Norway(Helsediroktoratet), hey´adda ayaa sheegtay in qof walba oo ka imaada dalka UK...
Deg-deg: Wadamo badan oo cabsi darteed xuduudkooda ka xirtay UK.
Dalka Ingiriiska waxaa sii badanayo tirada dadka laga helay nooc cusub oo xanuunka Coronavirus ah, kaas oo faafitaankiisu uu 70% ka badanyahay noocii horey...
Nooc cusub oo Coronavirus ah oo UK lagu arkay: Cabsi xoogan oo laga qabo.
Dalka Ingiriiska waxaa maalmihii ugu danbeeyay aad ugu faafay nooc cusub oo xanuunka Corona ah, kaas faafitaankiisu uu 70% ka badanyahay noocii horey loo...
Norsomnews - 19. desember 2020 0
Duqa magaalada Skien ee gobolka Telemark ee dalkan Norway, Hedda Foss Five ayaa shaley xili ay shir jaraa´id qabaneysay sheegtay in xanuunka Corona Virus...